गुल्मीमा जीप दुर्घटना : तीन जनाको ज्यान गयो, ६ जना घाइते « Nepal Page
गुल्मी, २९ असोज । गुल्मीमा जीप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको ज्यान गएको छ । ६ जना घाइते भएका छन् । बुटवलबाट गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास आउँदै गरेको लु १ ज ४४९० नम्बरको जीप गएराति रेसुङ्गा नगरपालिका १० अन्तर्गत पाँचरातेमा दुर्घटनामा परेको हो ।
दुर्घटनामा परि जीप चालक कमल थापा, खिमा थापा, जुना थापा, सुमित्रा सुनार ,राधा के.सी. र राजु थापा घाइते भएका छन् । उनीहरुको टाउको, हात र खुट्टामा चोट लागेको छ । दुर्घटनामा परि घाइते भएकाहरुमध्ये पाँच जनालाई थप उपचारका लागि पाल्पा लगिएको छ । एक जनाको भने गुल्मी अस्पताल तम्घासमा नै उपचार भइरहेको छ ।जीप अनियन्त्रित भइ सडकबाट ५ सय मिटर लत खसेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपालले प्यालेस्टाइनको पक्षमा भोट गरेपछि देउवासँग इजरायलको आपत्ति
काठमाडौं, १८ मंसिर । नेपालले प्यालेस्टाइनको पक्षमा मतदान गरेपछि इजरायल नेपालप्रति रुष्ट बनेको छ । काठमाडौंस्थित इजरायली राजदूत हनान गोडेरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री नारायण
बागमतीमा काँग्रेस अधिवेशन : निर्वाचन स्थलबाट हटाइयो चुनावी प्रचारका सामग्री
जल, जङ्गल र जमिनको प्रयोग गरी विकास गर्नुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिबिलिटी कम : सातवटा जहाज होल्ड, एउटा लखनउ डाइभर्ट
नागरिक सुरक्षामा प्रहरीको महत्वपुर्ण भुमिका रहने : दैलेख प्रहरी प्रमुख साह
दैलेख, १८ मंसिर । दैलेख प्रहरी प्रमुख भवश्वेर साहले प्रहरी र नागरिक बिचको समन्वयले मात्रै
आफूविरुद्ध टिप्पणी गरेपछि रेखा थापाको आरोप– कमल थापा राजतन्त्रविरोधी
काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा महामन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिएकी नायिका रेखा थापाले अध्यक्षका
रेखा थापाको भिडियो क्लिप सेयर गर्दै कमल थापाले भने– हाहाहा, नो कमेन्ट
काठमाडौं, १७ मंसिर । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले अभिनेत्री रेखा थापा गणतन्त्रको पक्षधर भएको टिप्पणी
कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन : कांग्रेसका तीनै समूह नेतृत्व लिन मैदानमा
काठमाडौँ, १७ मंसिर । नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनअन्तर्गत बिहीबारदेखि प्रदेश अधिवेशन सुरु भएको छ।
माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलन : विधान परिमार्जनका लागि ५ सदस्यीय उपसमिति गठन
काठमाडौं, १७ मंसिर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी कमिटी बैठकले विधान परिमार्जन गर्नको लागि
राजदूतको सुनुवाइका लागि बोलाइएको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक फेरि सर्‍यो
काठमाडौं, १७ मंसिर । तीन देशका प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइका लागि बोलाइएको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक
हिन्दी फिल्ममा हिरो हेलिकोप्टरमा बसेर दुलहीको घर गएको देखेपछि….
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले बिहीबार सातमध्ये ६ प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको